सामसुले २०१ 2016 मा फोल्डिंग स्क्रीन फोनहरू बनाउनेछ Androidsis
सामसुले पुष्टि गर्दछ कि यो सम्भव छ कि २०१ 2016 मा त्यहाँ लचकदार स्क्रीनहरूको साथमा स्मार्टफोनहरू छन्
सामसु and र एलजी यसको विकास गर्न धेरै कडा मेहनत गरिरहेका छन् लचिलो स्क्रीन संग पहिलो स्मार्टफोन। एलजी यी सुविधाहरूको टर्मिनल देखाउँदै पहिलो थियो एलजी जी फ्लेक्स र पछि el LG G फ्लेक्स २ र सामसुसँग फेरि लडाईयो सामसुङ्ग ग्यालेक्सी नोट एज र भर्खरको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज।
अब कोरिया ब्यासनेससँगको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले प्रदर्शन टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरेका छन् जुन दुबै विकासमा छन्। र सत्य यो हो कि यस पटक उनीहरूले उनीहरूको वचन राख्न सक्छन् र एन२०१ 2016 मा लचकदार स्क्रिनहरूको साथ फोनको नयाँ पुस्ता।
सामसु and र एलजी ठूलो स्तरमा लचिलो प्रदर्शनहरू विकास गर्न लागेका छन्
एलजीले पारदर्शी प्रदर्शनहरू सिर्जना गर्न यसको प्रविधिको बारेमा कुरा गर्‍यो, जुन हाल लक्जरी गाडी वा हवाइजहाजमा प्रयोग गरिन्छ। सियोल-आधारित निर्माता अनुसार तिनीहरू अझै पनी लामो यात्रा गर्नुपर्दछयो टेक्नोलोजी ठूलो उत्पादन गर्न र ठूलो पैमाने मा व्यावसायिकिकरण हुन अघि।
यद्यपि तपाईएक आधिकारिक सामसु source स्रोत विपरिततिर औंल्याउँछ। उनीहरु यो भन्न हिचकिचाउँदैनन् कि कम्पनी २०१ fold मा फोल्डिंग फोन उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछ। स्यामीका केटाहरूले केही समयको लागि लचिलो प्रोटोटाइपको परीक्षण गर्दै आएका छन्, यद्यपि अहिलेसम्म तिनीहरू यस प्रकारको उत्पादन गर्न सक्षम हुन आवश्यक टेक्नोलोजीको विकास गर्न सकेका छैनन्। ठूलो मात्रामा स्क्रीनहरू।
हामी पहिले नै समय मा देखेका छौं एक फोल्डेबल स्मार्टफोन स्क्रिनको लागि एक पेटन्टe, सामयिक प्रोटोटाइपको अतिरिक्त उनीहरूले हामीलाई २०१ 2013 मा देखाए। यद्यपि यो सत्य हो कि यो निर्माताहरू पहिलो पटक होइनन्। "अर्को बर्ष" पहिलो स्मार्टफोन आउने प्रतिज्ञा गर्दछ लचिलो स्क्रिनको साथ, चीजहरू वास्तवमै राम्रो देखिन्छन्।
तिम्रो के बिचार छ? के तपाईंलाई लाग्छ कि सामसुले वास्तवमै टेक्नोलोजी पर्याप्त विकसित गरेको छ कि अर्को वर्ष यसले फोल्डिंग स्क्रिनको साथ पहिलो फंक्शनल फोन प्रस्तुत गर्न सक्दछ? के तपाईलाई लाग्छ कि यो टेक्नोलोजी यसको लायक हुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसुले पुष्टि गर्दछ कि यो सम्भव छ कि २०१ 2016 मा त्यहाँ लचकदार स्क्रीनहरूको साथमा स्मार्टफोनहरू छन्
तपाईं अधिक सिक्न सक्नुहुन्थ्यो, सामसु यसैले स्मार्टफोन रिलीज गर्ने पहिलो व्यक्ति हो, २०१ 2013 मा ग्यालक्सी राउन्ड हेर्नुहोस्, बनाम फ फ्लेक्स २०१ 2014
धेरै जसो अघि सामसुले पहिले नै यसको लचिलो स्क्रीनहरू पहिले नै देखायो, जनवरी २०१ 2013 मा युम फिर्ता, २०१२ ढिलो ...
जीएसएमलाई जवाफ दिनुहोस्
अल्फोन्सो डे फ्रुटोस भन्यो
नमस्ते जीएसएम, ग्यालक्सी राउन्ड को रूप मा, यो टर्मिनल एक प्रोटोटाइप थियो जुन केवल उत्तर कोरियामा बेचिन्थ्यो र वास्तवमै सीमित इकाईहरूसँग। एक लचिलो शरीरमा लचिलो पर्दा, र एक कठोर वक्र स्क्रीन बीच मात्र एक ABISMAL फरक छ भनेर उल्लेख गर्न हैन। हो, ग्यालक्सी राउन्डले POLED प्यानल प्रयोग गर्दछ, तर यो लचिलो छैन।
त्यसैले म आफैं पुष्टि गर्छु, पहिलो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन एलजी जी फ्लेक्स हो, जसको स्क्रिन र शरीरले यसलाई अलिकता बाnt्ग हुन दिन्छ।
जब यो लचिलो डिस्प्लेको कुरा आउँछ, लेखमा म बृहत उत्पादनको बारेमा कुरा गर्दैछु, गैर कार्यात्मक प्रोटोटाइपको होइन। अवश्य पनि, सामसुले २०१२ को अन्त्यमा अन्य निर्माताहरूले जस्तै स्क्रिन प्रस्तुत गर्‍यो, तर तिनीहरू बाहेक अरू केहि थिएनन्, गैर-कार्यात्मक प्रोटोटाइपहरू जुन जन उत्पादन गर्न सकिँदैन।
Alfonso de Frutos लाई जवाफ दिनुहोस्
नयाँ छविहरूले Meizu MX सुप्रीमको होम बटन देखाउँदछ
यो क्वालकम क्विक चार्ज २.० प्रणालीले कसरी काम गर्दछ